Microstation: Ku wareeji Amarada Keyboard-ka - Geofumadas
Microstation: Qodobbada farriimaha ku qor taleefanka
Oktoobar, 2009 Microstation-Bentley
Waxaa jira waqtiyo aan u baahannahay inaan u tagno amar aad u badan, iyo marka amarkan aan ahayn mid hal guji ah waxaa suurtagal ah in lagu meeleeyo batoonka kumbuyuutarka.
Farsamayaqaannadani waxay sida caadiga ah ku sameeyaan tan macros ah ama amarro keyin ah, oo Microstation aysan ku lahayn xarun la mid ah AutoCAD, halkaas oo amarrada qoraalka ay ku yaalliin xagga hore. Kuwaas waxaa ka mid ah, amarro caadi ah:
xy = loo isticmaalo in lagu galo isuduwayaasha
nadiifinta wada hadalka si kor loogu qaado muraayadda nadiifinta
fence qoryaha si loo dhoofiyo waxyaabaha ku jira xayndaabka loo yaqaan fayl gaar ah
wadahadal dheeraad ah si looga dhigo macmiil ka database macluumaadka khariidada
taariikhda farsamada doodda si loo helo qaababka loo isticmaalay iyadoon la aadin maamulaha muuqaalka.
-Workspace> Furayaasha Waxqabadka. Halkan guddi ayaa la kiciyey halka aan ku dooranno badhanka shaqada, oo leh isku-darka suurtagalka ah ee ctrl, Alt ama isbeddel, si aan u helno illaa 96 isku-dhafan oo suurtagal ah oo u dhexeeya furayaasha shaqada 12.
Si aad u bixiso tusaale, haddii aan rabo inaan kudiyaariyo amarka shaandheeynta ee F1 badhan, nidaamka wuxuu noqon lahaa:
-Workspace> Furayaasha Waxqabadka
-Xulo muhiim ah F1
-Press button badhanka
-Kullan talaabo dl = 0
-Aniguna waan badbaadi.
Aan aragno markaa, sida loo dalbado. Waxaan rabaa inaan nuqul ka sameeyo sawirkeyga taxane guryo ah oo aan tixraac ugu leeyahay feylkayga.
-Ku shaandhee walxaha lagu koobi karo
-Kulji taliska koobiga
- Waxaan gujineynaa shaashadda
-Kuuji badhanka F1
-Waxaanu diyaar u nahay, arrintan waxaynu nuqul ka qaadnay xog aan ku xirneyn dhibicda, oo ku soo noqnoqonayso, taas oo noqon lahayd mid caqli gal ah haddii aan taas ku samayno xog badan oo badan.
Post Previous" Hore Guys doonaya inay noolaadaan ...
Post Next Isbarbardhiga barnaamijka GIS si loogu sahloNext »